(၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁ဝဝဝ တန်ထီဖွင့်ပွဲအတွက် ထီစာအုပ် နှစ်သိန်း ခြောက်သောင်းကျော် ရောင်းချရ?? - Yangon Media Group
(၃)ကြိမ် မြောက် ကျပ် ၁ဝဝဝ တန်အောင် ဘာလေ သိန်းဆုထီဖွင့်ပွဲအတွက် ထီစာအုပ် နှစ်သိန်း ခြောက်သောင်း ကျော်ရောင်းချရန်ကျန်ရှိခဲ့ပြီး ရောင်းမကုန်ထီ လက်မှတ်များမှ ဆုမဲများထွက်ပေါ်လာပါက ဆုမဲ အသစ်ထပ်မံပြန်လည် ဖွင့်လှစ် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည် တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ သတင်း ရရှိသည်။ မေလ ၁ ရက်နေ့တွင်ကျင်း ပမည့် (၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁ဝဝဝ တန် အောင်ဘာလေသိန်းဆု ထီဖွင့် ပွဲအတွက် ‘က’ အက္ခရာမှ ‘ကဃ’အက္ခရာထိ စုစုပေါင်းအက္ခရာအ လုံးရေ (၃၇) လုံးအား ဧပြီ ၁ ရက် မှ ဧပြီ ၂၆ ရက်အထိ ရောင်းချခဲ့ရာ ကြိုတင်မှာယူထားသူများက လျှော့ ချဝယ်ယူခဲ့ကြသဖြင့် ထီစာအုပ် ပေါင်း ၂၆၁၂၉၅ မှာ ရောင်း မကုန်ထီလက်မှတ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီး ဌာ နမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”ထီစာ အုပ်ပေါင်း နှစ်သိန်း ခြောက်သောင်း ကျော်က ရောင်းမကုန်ထီလက်မှတ် တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်။ မေ ၁ရက် နေ့ ထီဖွင့်ပွဲမှာ ရောင်းမကုန်ထီ တွေကနေ ဆုမဲတွေပေါက်ခဲ့ရင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာပါ။ ဆု မဲတွေကို အထူးဆုကြီးစနစ်၊ ဆု တစ်ဆုချင်းစနစ်နဲ့ ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာဆုမဲစနစ် သုံးမျိုးနဲ့ဖွင့်လှစ် ပေးနေပါတယ်။ အထူးဆုကြီးစနစ်၊ ဆုတစ်ဆုချင်းစနစ်ကနေ ရောင်း မကုန်ထီလက်မှတ် ဂဏန်းနဲ့ ဆုမဲ ပေါက်ခဲ့ရင်တော့ ထီလက်မှတ်ကို ပွဲမှာထုတ်ပြပြီး ရောင်းရထီလက် မှတ်ဂဏန်း ထွက်ပေါ်လာတဲ့အထိ ပြန်ဖွင့်ပေးသွားမယ်”ဟု ဧပြီ ၂၉ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာဆုမဲ စနစ်တွင် ရောင်းမကုန်ထီလက် မှတ်မှ ဆုမဲများထွက်ပေါ်လာပါက ယင်းဆုမဲတန်ဖိုး စုစုပေါင်းပမာဏ အား အခြားသင့်လျော်သောဆုမဲ များပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီး ဌာ န၊ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာန ခွဲမှညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်သန့် လွင်က ”ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ စနစ်ရဲ့ ထီဆုမဲတွေကရောင်းပြီး ထီထဲကဖြစ်နိုင်သလို ရောင်းမကုန် ထီထဲကလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ရောင်းမကုန်ထီထဲက ပါလာခဲ့ရင် ပါလာတဲ့ပမာဏကို စုပေါင်းပြီး ဆုတစ်ဆုချင်း စနစ် ဖြစ်တဲ့ ၁ဝ သိန်း၊ သိန်း၂ဝ၊ သိန်း ၅ဝ၊ သိန်း ၁ဝဝစတဲ့ သင့်လျော် သော ဆုမဲတွေအနေနဲ့ ပြန်ဖွင့် လှစ်ပေးသွားမှာပါ။ ဘယ်ဆုမဲတွေ ထပ်တိုးဖွင့်လှစ်ပေးမလဲဆိုတာ တော့ ကျန်ရှိတဲ့ပမာဏပေါ်မူ တည်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
အိုင်အက်စ် စစ်သွေးကြွများ ရခိုင်သို့ ဝင်လာမည်ကို အခြားသူများထက် ပိုစိုးရိမ်ဟု AA ဆို
မန်းပဲမျိုးစုံ ဈေးကွက်တွင် မြေတောက်ပဲနှင့် ပဲတီစိမ်း အဟောင်းတို့ ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်??
ဂျူဗင်တပ်အတွက် အောင်မြင်သော နှစ်ဖြစ်ကြောင်း စီရော်နယ်ဒို သုံးသပ်၊ စာချုပ်သစ်အတွက် မေးခွန်
အရက်သောက်စား စကားများရာမှ အရက်ပုလင်းဖြင့် အရိုက်ခံရသူ သေဆုံးမှု ဒဂုံအရှေ့ တွင်ဖြစ်ပွား